Haweeney Digniin Culus U Dirtay Gabdhaha Wali Aan La Bikra Jabin (Qormo Xiiso Badan) - iftineducation.com
iftineducation.com – Haweenka dhalinyarada ah ee dalka Koofur Afrika ayaa shaaca ka qaaday in dhibaatooyin ay ku qabaan raga aan shaqeyn ee ay bilaan talaabooyin naf jelcleeysi ahana ka qaada marka ay musalafaan.
Shabakad ka faaloota arimaha bulshada oo laga leeyahay dalka koofur Afrika ayaa soo xigatay qof dumar ah oo calaan calaysa.
RIIX HALKAAN DAAWO MUUQAAL
Shabakadaas ayaa qortay in khayaano xun loo geestay inan yar oo wax kasta oo ay heli kareysay siisay wiil ay saaxiibo yihiin oo ay nolol wadaagi jireen.
Gabadha cabaneysa ayaa sheegtay in ay tahay qof yar oo xil kas ah, aqoona leh laakin ay jaha wareersan tahay maadaama uu afka ciida u galiyay qof ay ku kalsooneyd.
Qofkaan dumarka ah ayaa sheegtay in Sanado ay biileysay wiilka ay saaxiibada ahaayeen laakin aysan ka macaashin wanaagaa.
Gabadhaan oo magaceeda ku soo gaabisay Vuvu ayaa sheegtay in aysan hadal ku dheeraan karin muhimada cabashadeedana ay tahay in ay u digto dumarka kale ee bad qaba oo ay ula jeeday dumarka wali bikrada ah sida ay sheegtay waxa ay ka cabanaysa dhibaatada loo geystay iyadoo dhahday ragga intooda badan waa danaystayaal waxayna wax ka fiiriyaan meelo gaagaban wuxuu ila dhaqmay si aanan waligey ka filaneyn dumarka wali bad qaboow ilaashada xuubkiina oo ogaada mar hadii la furo ama la jabiyo bikradiina waxaad noqoneysaan kuwa aan sidii hore loo xushmeyn
Ragga qaarkood ayaa inta badan ku dhaqma falal aan marna wanaagsaneyn walow ragga soomaliyeed intooda badan wanag u hayaan gabadha ay nolasha la wadaan inta uu jiro calafka isu keenay